बिल गेट्स पण्डित - Blogs of Sagar Prasai
बिल गेट्स पण्डित
A scene from the play- Bill Gates Pandit. Picture by: Ajay Rana Bhat
धेरै बर्ष पहिला- जे गर्दा पनि असफलता हात लागे पछि दिक्दार भएर मैले एउटा कविता लेखेको थिए।
"...सुनसान अध्यारो संसारमा एक्लो भएछु म,
ओल्टाई-कोल्टाई हेरे जिन्दगी रित्तै रहेछु म।
चिताको लाश र म मा- केहि फरक छैन
उ उठ्न सक्दैन- मेरो उठी जाने ठाउँ छैन, आखिर कुरा त उहि भयो।
सुख्खा तातो बन्जरमा प्यासी भएछु म,
ओल्टाई-कोल्टाई हेरे जिन्दगी रित्तै रहेछु म।..."
बिरक्तेर लेखेको यी पङ्कतिमा एकदमै धेरै पिडा छिरेछ। अलि पछि मैले फेरी आफुलाई सम्हालेपछि त यो गीत पढ्दा डर पो लाग्न थाल्यो। निदाएको बेला पनि यो गीतको शब्द आएर तर्साए जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसपछि मैले मेरो ब्लग बाट यो गीत हटाईदिए र अब कहिले सम्झिन भनेर लेखेको डायरी बाट नि च्यातिदिए।
तर भएछ के भने- आधासुर नाम गरेका युवा संगीतकार (कबड्डी फिल्मको "माया खै कसले बुझ्यो" भन्ने गीत बनाउने) जो मेरा गाँउले भाई पनि हुन्, उनलाई चाहि त्यो गीत एकदमै फरक खालको लागेर टिपेर राखेका रहेछन्।
पछि उसले एकदिन मलाई- "दाई मैले त्यो गित कम्पोज गरेको छु है" भन्यो। मैले छक्क पर्दै सोधे-"के मा काम लाग्ला त भाई त्यसतो गीत?"
त्यो बेला उसले भनेको थियो-"यहि गीतमा मिल्ने कथा एकदिन बन्छ दाई।"
नभन्दै अहिले मण्डला थिएटर मा प्रदर्शन भईरहेको नाटक- बिल गेट्स पण्डितको कथा र गीतको व्यथा मिलेछ। नाटकका मुख्य पात्र पण्डित जी, त्यो गीत लेख्दा बेलाको म जस्तै रहेछन्। त्यसैले आधासुर भाई र नाटकका निर्देशक सुलक्षण भारतीले मिलेर त्यो गीतलाई नाटकमा प्रयोग गरेछन्।
अस्ति नाटक हेर्दा पो पहिलो पल्ट आफैले लेखेको गीत सुने। नाटककै मुख्य पात्र बिजय बरालले गाएका त्यो गीत मलाई पहिलाको जस्तो डर लाग्दो लागेन, बरू अर्कै खाले राम्रो पो लाग्यो।
सायद नाटकको कथा र प्रस्तुति राम्रो भएर हो कि?
तपाईहरू पनि मण्डला थिएटरमा नाटक बिल गेट्स पण्डित हेर्न जानुहोला भन्ने मेरो अनुरोध छ। एकदमै राम्रो नाटक सँगै मेरो जिवनसँग गाँसिएको त्यो गीत पनि सुन्नु हुनेछ। अनि नाटक र गीत दुवै कस्तो लाग्यो भन्न न। "बिल गेट्स पण्डित" फाल्गुन ३० गते सम्म सोमबार बाहेक हरेक दिन साँझ ५.१५ मा प्रदर्शन हुनेछ भने शनिवार दिउँसो १ बजे पनि प्रदर्शन हुनेछ।